Gleam: Izinhlelo zokusebenza Zokumaketha Eziklanyelwe Ukukhulisa Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Februwari 9, 2022 NgoLwesithathu, Februwari 9, 2022 Douglas Karr
Umngani wami uthe ukholwa wukuthi umsebenzi wokumaketha wenza ukuthi abantu abangafuni ukuthenga okuthile bakuthenge. Eshu... Angivumanga ngenhlonipho. Ngikholwa ukuthi ukumaketha kuwubuciko nesayensi yokuphusha nokudonsa abathengi namabhizinisi ngomjikelezo wokuthenga. Kwesinye isikhathi ukumaketha kudinga okuqukethwe okumangalisayo, kwesinye isikhathi kuwumnikelo ongakholakali… futhi kwesinye isikhathi kuwukugudluza okuncane kakhulu okukhuthazayo.
Gleam: Inika Amandla Ngaphezu Kwamakhasimende angu-45,000+
Gleam inikeza izinhlelo zokusebenza ezine ezahlukene zokumaketha ezinikeza lokho kugudluza. Bangamasango okuheha isivakashi ukuthi sihlanganyele ngokujulile nomkhiqizo wakho - noma ngabe lokho ukwabelana ngawo ngomlomo, ukubhalisela uhlu lwama-imeyili, ukwabelana ngesithombe somphakathi, noma ukuzuza imiklomelo. Izinhlelo zokusebenza zokumaketha ze-Gleam zihlanganiswe ngokugcwele ne-ecommerce yakho, izinkundla zokumaketha, neziteshi zomphakathi ukwenza umsebenzi… futhi zingaphelelwa ideshibhodi eyodwa:
Qalisa Imincintiswano - Yakha imiqhudelwano enamandla nama-sweepstake ebhizinisi lakho noma amaklayenti. Uhlu lwethu olukhulu lwenhlanganisela yezenzo, ukuhlanganiswa nezici zesinqunjwana zikusiza ukuthi wakhe imikhankaso eyahlukene.
Sebenzisa Ngokushesha Imiklomelo - Dala kalula imiklomelo esebenzisekayo ngokushesha ukuze uthole izenzo ezivela kubasebenzisi bakho. Ilungele amakhuphoni, okhiye begeyimu, ukuthuthukiswa kokuqukethwe, umculo noma ukulanda.
Social Galleries - Ngenisa, khetha futhi ubonise okuqukethwe okuvela ezinkundleni zokuxhumana noma ugijime imiqhudelwano yezithombe ehehayo ngohlelo lwethu lokusebenza oluhle Lwegalari.
Ukuthwebula I-imeyili - Indlela ehlakaniphe kakhulu yokwakha uhlu lwakho lwe-imeyili. Bonisa umlayezo oqondiwe noma amafomu okungena kumuntu olungile ngesikhathi esifanele futhi uwavumelanise ngokuqondile nomhlinzeki wakho we-imeyili.
Ukuhlanganiswa kufaka phakathi amapulatifomu angaphezu kwe-100, okuhlanganisa i-Amazon, i-Twitter, Klaviyo, YouTube, Bit.ly, Facebook, Kickstarter, Thenga, Instagram, Salesforce, Product Hunt, Twitch, Spotify nokuningi...
Bhalisela i-Gleam futhi Yakha Uhlelo lwakho Lokuqala Lokusebenza
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kuso sonke lesi sihloko Gleam nezinye izinkundla.
Tags: izinhlelo zokusebenza zokuncintisanaizinhlelo zokusebenza zokuthwebula i-imeyilii-popup yokuthwebula i-imeyiliInhloso yokuphumagleamglelam.ioizinhlelo zokusebenza zokumakethavuza izinhlelo zokusebenzaizinhlelo zokusebenza zegalari yezenhlalo